जानकी रेल ३० जनवरीको जनकपुरमा पुग्ने ! | अपन जनकपुर
जानकी रेल ३० जनवरीको जनकपुरमा पुग्ने !
अप्पन समाचार माघ ४ जनकपुरधाम । जनकपुर-जयनगर रूटका लागि भारतमा बनेको रेल सेट चेन्नइबाट नेपालका लागि हिँडेको छ।
भारतले नेपाललाई आवश्यक कर्मचारी पनि दिने प्रस्ताव तीन महिनाअघि नै पठाएको थियो। आवश्यक सीमित संख्यामा भारतीय कर्मचारी लिने र बाँकी स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापन गर्ने नीति विभागको छ। जनकपुर-जयनगर रेलवे ट्रयाकलाई गएको वर्षायामको बाढीले विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसको मर्मतको काम अन्तिम पूरा भएको छ। अबको केही दिनमै रेलवे लिक सञ्चालनका लागि तयार हुने विभागका इन्जिनियरहरूको दावी छ।
जयनगर-जनकपुर करिब ३५ किमी खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न लागिएको हो। भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो खण्डमा रेलवे ट्रयाक बिछ्याइएको हो। जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्म करिब ७० किमी रेलवे ट्रयाक भारतीय सरकारको सहयोगमा निर्माण थालिएको थियो, तर जनकपुरबाट बर्दिवाससम्म भने मुआब्जा विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।